အတိုအထွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အတိုအထွာ
Posted by ဇီဇီ on Oct 31, 2012 in Food, Drink & Recipes, Style & Beauty | 31 comments
တိုတို ထွာထွာ၊ ပေါက်တတ်ကရ
ဘာကြီးတုန်းလို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့ဗျို့။ ရေးချင်တာတွေက များပြီး ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ စိတ်ထဲရှိတာတွေ ရေးလိုက်တာမို့ပါ။
အစားအသောက်၊ လှပရေးရာ၊ ချစ်မှုချစ်ရေး စသည်ဖြင့် ရေးပါ့မယ်။ လိုရာယူကြပါ။ ဖတ်ထား၊ မှတ်ထားတာတွေထဲက ကိုယ်တွေ့တွေပဲ ပြောမှာနော်။
၁) ဘီယာ တစ်လုံး လိုရာသုံး
မျက်စိပြူးမသွားကြပါနဲ့။ သူများတွေ သီလယူနေတဲ့ ကာလမှာ ဘီယာသောက်ဖို့ ဆွဲဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ အသုံးချပုံကိုသာ ရေးလိုခြင်းဖြစ်၏။
ဘဲနဲ့ပေါင်းပါ။ (အပျိုကြီးများ တခြား အဓိပ္ပာယ် မတွေးစေလိုပါ။) ဘဲပေါင်း ပေါင်းရာတွင် ရေ အစား ဘီယာသုံးရန် ဆိုလိုခြင်းပါ။ ဘဲတစ်ကောင်ကို ဘီယာတစ်ဘူးထည့်ပါ။ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အနူးမြန်၏။ ပိုမွှေး၏။ အရသာပိုကောင်း၏။ တော်ရုံ အစားအသောက် စိတ်မဝင်စားသော ကိုကို များပင်လျှင် ဘီယာနဲ့ ပေါင်းသော ဘဲပေါင်းဆိုသည်နှင့် မျက်လုံးအရောင်များ လက်လက်ထလာသည် အထိ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်လာပါမည်။ ပရက်ရှာ ကွတ်ကာ ရှိရန်မလို။ ရိုက်(စ) ကွတ်ကာရှိရင် ချက်လို့ရပါတယ်။ ဘဲ တစ်ကောင်ကို အနေတော်ခုတ်ပြီး ဆား/ငံပြာရည် နယ်ထားပါ။ အချိုအရသာနဲ့ အရောင်အတွက် သကြားထမင်းစားဇွန်း နဲ့ ကြာညို့ (ပဲငံပြာရည် အနောက်) ထည့်ပါ။ ပြီးတော့ ချင်း အပြားဝိုင်းလေး ၅ ခု၊ ကြက်သွန်ဖြူ တစ်လုံးစာ အမွှာလေးများ၊ ပိုမွှေးချင်ရင် နာနတ်ပွင့် ၃/၄ ပွင့် ထည့်ပါ။ ရေအစား ဘီယာ တစ်ဘူး ထည့်ပြီး ခလုပ်နှိပ်ထားပါရန်။ မီးဝါလေး လင်းလာပြီဆိုမှ အဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အရောင်၊ အဆင်း၊ အနံ့၊ အရသာနဲ့ ပြည့်စုံသော ဘဲဘီယာပေါင်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တနည်းသုံးဖို့ကတော့ ဆံပင် အလှ အတွက်ပါတဲ့။ ဘီယာနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပါဆိုပဲ။ စမ်းပြီးပါပြီ။ ဆံပင်သားတော့ ပြောင်သွားပါရဲ့။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဘီယာနံ့ ထောင်းထောင်းထပေါ့။ (မိဘနဲ့ နေတဲ့သူများ၊ ချစ်သူနဲ့သွားတွေ့မဲ့သူများ မစမ်းသပ်စေချင်ပါ။ ဟီးဟီး)
၂) ဘာလာလာ (DOM)
ရုံးက တရုတ်မတွေ အကြံပေးလို့မှာပြီး သောက်ရာက စတာပါ။ ညဦးသောက်ရင် တရေးမနိုးပဲ အိပ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ တစ်ဖန်ခွက်သောက်လိုက်တာ တစ်ခဏအတွင်းမူးပြီး အိပ်သွားတာပါ။ အဲဒါနဲ့ မကောင်းဘူးသွားပြောတော့ သောက်ရမှာက လက် နှစ်လုံးလောက်ပါတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်လွဲသွားတာပါ။ မေမြို့ဝိုင်လိုမှတ်နေတာကိုး။ အမျိုးသမီးများအတွက် သင့်တော်သော တောနစ် ဝိုင်လို့လည်း ညွှန်းကြပါတယ်။ ပြီးတော့ဟင်းချက်တဲ့ဝိုင်အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာကြောင့် ကျနော် အကြိုက်တွေ့သွားတာပါ။ သောက်ရတဲ့ အရသာကိုမှ မကြိုက်တာကိုး။ ဆေးမြစ်တွေပါတဲ့ အနံ့ မွှန်မွှန်ကြီးနဲ့ပါ။ အဲဒါနဲ့ ဘာလာလာ (DOM) ဆိုပြီး အသားနယ်တိုင်း သူ့ကို ထည့်နယ်၊ ဟင်းရွက်ကြော်တိုင်း သူ့ကို ထည့်ကြော် စသည်ဖြင့်သုံးပါတော့တယ်။ စလုံးက လုံး…ဝ အရသာမရှိတဲ့ မွေးမြူရေးကြက်ကကို ချိုတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ တရုတ်မှာတော့ မီးနေသည်တွေ သောက်ကြတယ်။
ဟိုနေ့က မမလေး ရေးသွားတာလေး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ နနွင်းမှုန့် ရောလိမ်းခိုင်းတဲ့ ဟာလေ။ ကျနော် ရောမလိမ်းဘူးပါ။ တစ်ခုချင်းဆီကို တော့ အလှ အပ ရေးရာအတွက် သုံးဖူးပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ရောင်းတဲ့ ဒိန်ချဉ်အစစ်ရရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တစ်ပတ် ၂ခါလောက် မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း ဒိန်ချဉ် လက်ဖက်ရည် တစ်ဇွန်းနဲ့ ယူ မျက်နှာပေါ် ခရင်(မ) လိမ်းသလို တို့ပြီး လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ ဖွဖွလေး ဖိလိမ်းပါ။ မျက်လုံးတော့ရှောင်ပေါ့နော်။ ပြီးရင် မျက်နှာမှာဒိန်ချဉ်ဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ ခြောက်သွားအောင် ဒီ အတိုင်းထားလိုက်ပါ။ ခြောက်လာရင် နဲနဲ ပူလာသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆပ်ပြာအပြော့စားလေးနဲ့ မျက်နှာပြန်သစ်လိုက်ပါ။ ၁ လ အတွင်း ထူးခြားပါတယ်။ မျက်နှာအသားချောပြီး နွားနို့ရောင်သန်းလာတာပါ။ (အသားအရေ အရမ်းပါးရင်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။) အိမ်ကလူတွေကတော့ ကျနော် လိမ်းတဲ့နေ့ကစပြီး ဒိန်ချဉ်မစားကြတော့ပါ။ :harr:
နောက် သုံးရမဲ့နေရာက ဆိတ်သားချက်ရင်သုံးကြပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း ဒီ နည်းကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါရဲ့။ မနက်ဖြန် ဆိတ်သားချက်မယ်ဆို ဒီ နေ့လို ဆိတ်သားတုံးလေးများကို ဒိန်ချဉ်နဲ့ နယ်ပြီး ရေခဲ သေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ရက်ချက်ရင် မညှီတဲ့ အပြင် အနူးမြန်ပါတယ်။
အမှုန့်ကိုတော့ ဟင်းချက်ရာမှာသုံးတာ လူတိုင်းအသိပါလေ။ နနွင်းတက်ကိုလည်းလူတိုင်းမြင်ဘူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ခြင်ပေါတဲ့ရာသီဆို နနွင်းမှိုင်းတိုက်ကြတာလေ။ ခုပြောမှာ အဲဒီ နနွင်းတက်ပါ။ မှိုင်းတိုက်တဲ့ ပိန်ချောက်ချောက်နနွင်းတက်မဟုတ်ဘူးနော်။ ချိုးကြည့်လိုက်ရင် အထဲမှာ ဝါထိန်နေတဲ့ နနွင်းတက် အကြီးမျိုးကိုရှာပါ။ လက်တို့ ခြေထောက်တို့ များ သနပ်ခါးလိမ်းရင် အဲ့ဒီ အတက်လေးပါ ရောသွေးပြီးလိမ်းနိုင်ပါတယ်။ နနွင်းက ပူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်လိမ်းရင်တော့ နွေရာသီရေချိုးပြီးတိုင်းလိမ်းတာပါ။ အသားအရေဝါဝင်းစေတယ်၊ ချွေးပုတ်တွေ ထွက်ပြီး ကိုယ်နံ့ ဆိုးတာတွေလဲ ပျောက်ပါတယ်။ မျက်နှာတော့ မလိမ်းပါနဲ့။ တင်းတိမ် ထွက်တတ်လို့ပါ။
၅) လှရာပရာ အတိုအထွာ
တကယ် အတိုအထွာလေးတွေလာပါပြီ။ အဖွား၊ အမေ၊ အဒေါ် ဆရာ့ ဆရာမကြီးများရဲ့ လှရေးပရေး လက်ချာများကို စုဆောင်းရရှိပြီးသကာလ……….
အသက် ၃၀ ကစ နှုတ်ခမ်းနီ တစ်ဘူးပဲဆောင်ထားမယ် ကြံရင် အနီရောင်ပဲဝယ်ပါတဲ့။ လိုတဲ့ အချိန် ရဲရဲတောက်လှချင်ရင် အရေးပေါ် ထင်းထင်းလေး ဆိုးပြီး သဘာဝကျကျ လှချင်ရင် ပါလေကာပဲ ဆိုးပါ ဆိုပဲ။ အဝတ်အစားဘာရောင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။ ကိုယ့်မလဲ ဒီတစ်ရောင်ပဲ ရှိတော့တယ်။
နောက် လွယ်တဲ့ အိတ်ထဲမှာ ပဝါ လေး တစ်ထည် အမြဲဆောင်တဲ့။ အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ် ကိုယ့်မလှတဲ့နေရာတွေ ဖုံးရဖိရတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာတော့ ဓာတ်ပုံကို သာကြည့်ကြပါ။ (from Internet)
နောက် အသက်ကြီးလာရင် မျက်လုံး အရောင်တောက်မှုကျတတ်လို့ အိုင်းရှဲဒိုး ထက် လိုင်နာဆိုးပါဆိုပဲ။ ဘယ်လို ဆိုးမလည်း ဆိုတာလည်း ပုံတွင်ရှူ့ပါ။ (Credit to SIG)
၆) အဟမ်း၊ ဒါကတော့ အချစ်ရေးအတွက်ပါ။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို တစ်ဆုံးမတွေးကြနဲ့နော်။ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ချစ်တဲ့နည်းဆိုလို့ပေးမှာ။
လူချစ်လူခင် များချင်ရင်တဲ့၊ သနပ်ခါးနဲ့ အုန်းရည်လေး နဲ့သွေးပြီးတဲ့၊ ငှက်ပျောဖက်ပေါ်တင်ပြီးမှတဲ့ မျက်နှာမှာလိမ်းပါတဲ့။
ဝန်ခံချက်။ ။ အမှန်တော့ ဒီပို့(စ) က ဓာတ်ပုံတင်တာကို စမ်းသပ်ချင်လို့ တင်တာ။
ဟင်။ လွဲချက်ကတော့ ခေါင်းစဉ်မတပ်လိုက်ရဘူး။
အဟီး .. အစ်မရေ … နည်းတွေကတော့ အစုံပဲ … ။ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ …ဒါမျိုး ပိုစ့်ဆို သဘောကိုကျလို့ … ။ အဟီး …
ဘီယာ အသုံးဝင်ပုံကတော့ … မိုက်တယ်နော် .. ခေါင်းလျှော်လို့ ၇မှန်းတော့ မသိသေးဘူး …. ရေမွှေးနံ့ ပြင်းပြင်းတွေ လူကြားထဲသွားရင်း ရှုမိလျှင် ခေါင်းကိုက်တယ် … အခုလို ဘီယာနံ့ လေးဆိုတော့ .. မဆိုးဘူးပဲ … :harr:
ဒိန်ချဉ်ကို ဒီတိုင်းသုံးတာကတော့ သိပ်အားမပေးချင်ဘူး အစ်မရေ … dry skin တောင်ချွေးပေါက်ကျယ်ပြီး အဆီတွေပြန်လာတတ်လွန်းလို့ပါ ။
ဟုတ်လား Etone ရေ။ အစ်မနဲ့တော့ အရမ်းတည့်လွန်းလို့ မိန်းကလေး၊ ယောင်္ကျားလေး၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ လိုက်ပြောတာ လမ်းထိပ်က ဒိန်ချဉ်သည်ကြီး ကောင်းစားသွားပါရောလား။ :harr:
ဒိန်ချဉ်ကို မျက်နှာလိမ်းပြီး ခြောက်မသွားမှီမှာ စကားပြောခြင်း ပါးစပ်လှုပ်ခြင်း မပြုသင့်ဘူးတဲ့၊ ပြုလုပ်ရင် ဘာဖြစ်လဲဆိုတော နှာတံ နဲ့ နှုတ်ခမ်း တဖက်စီက အသားအရေ
နေရာမှာ ပါးရေတွန့်လွယ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပြီး၊ မျက်နှာကိုလိမ်းတဲ့အခါ အထူးသဖြင့် ပါးနှစ်ဖက်ကို လိမ်းတဲ့အခါ မေ့စေ့မှဦးခေါင်းဆံပင်ဖက် အပေါ်ကိုပင့်လိမ်း လိမ်းရပါကြောင်းတော့ အလှပြင်ဆိုင် က မမတွေပြောတာ သိရပါ၏။
ပြည့်စုံအောင်ပြောပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျေး ပါ။ ကိုခင်ခကိုတော့ နိုင်ဘူးတော့။ အကုန်သိ။
ဪ။ ရှန်ပူနဲ့လျှော်ပြီးမှ ရေဆေးပြီးမှ ဘီယာလောင်းလျှော်လေ။ ခဏထား။
အရင်တုန်းကတော့နနွင်းတက်လိမ်းဘူးတယ် …၀င်းလာတာတော့အမှန် ..
ဒါပေမဲ့နဲနဲနံတယ်..ပျင်းလို့မလိမ်းတော့တာနဲ့ ခုတော့ပြန်ညိုသွားပြီ …
ဆားဝက်ခြံအခုတလောထွက်နေလို့ နည်းတွေအကုန်ကူးသွားတယ် ..
ဟင်းချက်တဲ့မကျည်းသီးထဲဆနွင်းနဲနဲထည့်လိမ်းရင်နေလောင်တာတွေပျောက်ပြီး အသားပြန်ဝင်းသွားတာတော့သိတယ် ..အရင်ကတော့လုပ်ဖြစ်တယ် အခုတော့နေမလောင်တော့လို့မလိမ်းဖြစ်တော့ဘူး
ဆားဝက်ခြံအတွက် နောက်တစ်နည်းရှိပါတယ်။ နောက်ရက်ရေးပါ့မယ်နော်။.
သြော်..လွဲချက်ကတော့….. နှုတ်ခမ်းနီ စဆိုး တတ်စ ထဲက အမြဲ တမ်း ရှိနေတတ်တဲ့ အမျိုး အစား ပဲ ကွဲ သွား တဲ့အနီရောင် နှုတ်ခမ်း နီ တွေ ကို အသက် ၃၀ ကျော် တော့ စွန့် လွှတ်ပြီး ၊ ဘယ်တုန်း ကမှ မကြိုက်ခဲ့ တဲ့ အဖျော့ လေးတွေ ပဲ ပြောင်း ဆိုး နေမိတယ်။
အိုင်း ရှဲ ဒိုး တင်လိုက် ရင် ရုပ်ကြီး ပို ရင့် သွား တာ သတိ ထား မိတယ်။ လိုင်နာ ပြောင်း သုံး ကြည့် အုံး မယ်။
DOM က ၀ိုင်လား ၊ ၀ိုင် တို့ ဘီယာတို့ သာ ၀ယ်ထား ရင် ဟင်းထဲ ကို ရောက်မှာ မဟုတ်တော့ လို့ မစမ်းတော့ ဘူး။
ဒိန်ချဉ် ကတော့ ကြိုက်တယ်။ သီးစုံပါတာတွေ တွေတော့ မကြိုက်ဘူး။ ဘာမှ မရောတဲ့သဘာဝ ဒိန်ချဉ်ပဲ ရှာဝယ်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောတာလည်း မြန်မာပြည်က သဘာဝဒိန်ချဉ်စစ်စစ်ပါ။ သစ်သီးနဲ့ဆိုရင် စားလို့ပဲကောင်းပါတယ်။
ဇာလေးရေးပြမှပဲ…မဆီမဆိုင် တွေးမိတာက တစ်နေ့တစ်နေ့…
ခန္ဓာငါးပါးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေရဒါ… အကြောင်းအရင်း သမုဒယသစ္စာကို
မတွေ့သေးသ၍တော့ ခန္ဓာအိမ်အလိုကို လိုက်နေရဦးမှာပါလားလို့..လေ.. လေ..။။
ဒါတွေကို တွေးမိပေမဲ့လေ.. တွေးမိပေမဲ့..
ဂျစ်တဲ့ ဇျာလေး ပေးတဲ့နည်းတွေဆို အူးစည် နှစ်လုံးသားက အစမ်းသပ်ခံပီးတော့
ဟုတ်ရား မကြီးဇာ.. မကြီးဇာ.. :gee:
ကိုရင်စည်၊ ကျနော်တော့ သမုဒယ အသစ်တွေမှာ မျောမျောနေလို့ ဗျို့။ ပါရမီက အဲလောက်ရင့်တာကလား။.
ဆိတ်သား၊ကြက်သား တို့ကို ဒိန်ချဉ်လေးနဲ့ ချက်ရင်
မညှီတဲ့ အပြင် အနူးမြန်လို့ ချက်ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီတိုင်းစားတာတော့ ချဉ်ကာစ မလိုင်ဒိန်ချဉ်လေး ပိုကြိုက်တယ်…
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ ချဉ်ကာစ ဒိန်ချဉ် က စားအကောင်းဆုံးပါ။.
ချစ်ယောင်းမ မခိုင်ဇာရေ ဒီကရွှေကြည်ကတော့လှပြီးသားမို့အလှအပတွေမလုပ်တော့ပါဘူး
ရွှေကြည် လှပြီးသားဆိုတာယုံပါတယ် ညီမရေ။
ဟာ့..ဟာ့..ဟာ့…(ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မပေါက်ဘဲ ကွင်းထဲက စာသားဖတ်မိပြီး
ဘဲဘီယာပေါင်းကို ကိုကိုများအတွက် မှတ်သွားပါ၏။
ဒိန်ချဉ် ကတော့ စမ်းသပ်ကြည့်အုံးမယ်…မျက်နှာပေါ် တစ်ခါ၊နှစ်ခါပဲ လုပ်ဖူးသေးတယ်။
အလှအပကတော့ မျက်နှာပြောင်နဲ့ပဲ နေတာ များတယ်။ ၀မ်းကွဲအစ်မတွေနဲ့အပြင်သွား
ရင် ပြင်ခိုင်းလို့ သူတို့လို မိတ်ကပ်လိမ်း၊နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုးပြီး ပြင်မိပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်က
အစ်ကိုက အခုထိ အမြဲအားပေးရှာပါတယ်။
‘ဘာရုပ်ကြီးမှန်း မသိဘူး။ နှုတ်ခမ်းနီကြီးနဲ့ လိုက်လည်း မလိုက်ဘူး’ တဲ့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်
အိုဗာ မဖြစ်တဲ့အလှ၊ အဲ့လိုအပြောခံရရင် စိတ်က သွားကာနီးလာကာနီး တိုမိရော။ အမှန်တော့ နှင်းနှင်းကိုယ်တိုင်ကလည်း နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးပြီးသွားရင်
‘ပါးစပ်စေ့လို့မရတဲ့ ရောဂါ’ ရှိတယ် :harr:
လူချစ်လူခင် များစေတဲ့နည်းတော့ မမှတ်တော့ဘူးနော်…
နှင်းရေ၊ ကျနော်လည်း အလှပြင်ရတာ သိပ်မကြိုက်ပါ။ စကင်းကိုတော့ အတော်ကဲ ပါဧ။်။.
ကျေးဇူးပါ မခိုင်ဇာ ခေါင်းလျှော်နည်းပြောပြလို့ …….
၁၅ မိနစ်လောက်ထားရတဲ့ ကပ်ခွာတောင်မသုံးဖြစ်ဘူး
ဒီအတိုင်းတောင် ဘယ်သူ့ရွေးရမှန်းမသိဘဲ တော်တော်စိတ်ရှုပ်နေရလို့ ..
(ဟိ ဟိ .. ယုံကြပါစေ)
မိုးဇက်ရေ၊အနော်လည်း စိတ်ရှုပ်ချင် နွန်းနွံ့ပါ။
ဆွိနဲ့ ဇိ တို့ စိတ်ရှူပ်နွန်းနွံ့ နေရင်… ခေါင်းစားမခံဘဲ..
အူးဂီ့၊ အူးအီးတီ၊ အူးစည်၊ အူးအံ့တို့လို ချာချာကောင်းတဲ့ ရယ်ဒီမိတ်တွေပဲ
အနော်က လယ်ဒီမိတ်ဆို ကယ်မီကယ် များလို့ ရှောင်ပါတယ်ဗျ။
အို ဘီယာနဲ.ခေါင်းလျှော်စရာလားအေ……. တမီးဒို.ကတော့ ခေါင်းတော့မလျှော်ဘူး ရေချိုးခါနီး ငါးမိနစ်လောက်အလို တစ်ပုလင်းလုံးမော့တောက်ပစ်လိုက်တာပဲ….. ၃မိနစ်လောက် စောင့်ပီးရေချိုး
အိုးးးးးးးးးးဘာပြောကောင်းမလဲ မူးမူးနဲ. ချိုးလို.ကောင်းသလားမမေးနဲ……….. ဟေဟေဟေ့
အို ဒီတမီး က ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘီယာသောက်တယ်လား။ :harr:
ဘဲကင်တို့ ဘဲပေါင်းတို့ကတော့ သူက ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်မကောင်းလို့ မစားဖြစ်ဖူး။ ရံဖန်ရံခါ ဆိုင်မှာလောက်ပဲ စားဖြစ်တယ်။
ဘီယာနဲ့တော့ ခေါင်းမလျှော်ပါရစေနဲ့ ။ အနံ့နဲ့တင် မူးသွားမှာ စိုးလို့ ။ မေမြို့ ဘက်က ၀ိုင်တချို့ကတော့ ကြိုက်တယ်။ တခါတရံပေါ့
ဒိန်ချဉ်လည်း ကြိုက်တယ်။ လိမ်းတော့မလိမ်းဖူးဘူး ။ စမ်းကြည့်မယ်လေ။ မဆွိလို လှလာမလားပေါ့
ပု ၊ ပိုလှလာရင် အစ်မကို မုန့်ဝယ်ကျွေးပါနော်။
ထွေးညို = jungle
အအေးပိုတာကို ထွေးညိုက ကာကွယ်နိုင်လို့လား။
ဘီယာ + သံလွင်ဆီ + ပျားရည်ရောလိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ အကြာ လှောချပါတဲ့ … ဆံပင်သားပြောင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ … စမ်းရမှာ … ဘီယာနံ့နံလို့ စွပ်စွဲခံရမှာကြောက်လို့ စမ်းရသေးဘူး